FBC - Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaatii Birriin miiliyoonni 267 ol akka burjaaja’u taasisaniiru kan jedhaman to’annoo jala oolan
Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaatii Birriin miiliyoonni 267 ol akka burjaaja’u taasisaniiru kan jedhaman to’annoo jala oolan
Finfinnee, Amajjii 3,2009(FBC) – Baankiin Hojii Gamtaa Oromiyaa Birrii miiliyoona 267 ol akka burjaaja’u hoggantoonni taasisaniiru jedhaman 2 to’annoo jala oolan.
Shakkamtoonni lamaan Saamu’eel Girmaa fi Ballaxaa Waaqkennee yammuu ta’an, waajjira muummee baankichaatti daayreektara abbaa adeemsa hojii faaynaansii fi abbaa adeemsa hojii liqaa maamiltootaati.
Shakkamtoonni beekamtii fi eeyyama baankichaa malee damee Dirree Dawaatti “riissiivabl ekispoort akkaawunt” banuun, namoota biroo waliin ta’uudhan baankichi Birrii miiliyoona 267 fi kuma 675 ol akka burjaaja’u taasisaniirun to’annoo jala oolfaman.
Koomiishinii Poolisii Federaalaatti diiviizhiniin qorannaa dhaabbilee faaynaansii miti mootummaa shakkamtooota kanneen kaleessa mana murtii olaanaa federaalaa; dhaddacha yakkaa 2ffaatti dhiyeessera.
Gaaffii mirga wabii shakkamtootaa, mormiin poolisii dhimmicha qoratu dhiyeessee fi yeroon qorannoo dabalataa har’a Amajjii 3,2009 waaree boodatti beellamni jijjiirramaa qabameefira.
Oduuwwan Biroo « Ministirri Muummee Haayilamaariyaam kamisa mana-marichaatti argamanii gaaffilee isaanii dhihaatanitti deebii nikennu	Itiyoophiyaan Hojii Barreessaa Olaanaa Dhaabbata Mootummootaa tumsuuf kutannoo cimaa qabdi: Doktar Warqinaa »